'डुइङ बिजनेस' वरीयता र सुधार- विचार - कान्तिपुर समाचार
एमसीसीले २० वटा तेस्रो पक्षले गरेका डुइङ बिजनेसजस्ता वरीयताक्रमहरूमा आधारित रहेर मुलुकहरूको मूल्यांकन गर्छ र २० वटामध्ये १०वटा सूचकांकमा ‘उत्तीर्ण’ भएपछि बल्लमुलुकहरूलाई अनुदान दिन योग्य मान्छ । नेपालले उत्तीर्ण हुन हाम्रो आय समूहमा परेका मुलुकहरूमध्ये आधाको भन्दा राम्रो गरेको पनि हुनुपर्छ । के बुझ्नु जरुरी छ भने, डुइङ बिजनेसजस्ता विविध सूचकांकमा नराम्रो गरियो भने यो परियोजनालाई असहज स्थितिमा पुर्‍याउनेदेखि अरू यस्ता कम्प्याक्ट नआउने जस्ता असर पर्न सक्छन् ।
हाम्रो देशमा पनि तारन्तारको तरलता अभाव र म्याक्रो–इकोनोमिक अस्थिरतापछि त्यही भएको त छैन भनी शंका गर्नुपर्ने स्थिति छ । यसले मुलुकको भविष्यलाई पनि राम्रो गर्दैन र द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना बढ्छ । यो स्थितिमा ‘ऋण पाउन सरलता’ जस्ता डुइङ बिजनेसका सूचकहरूको स्थानीयकरण गरिनुपर्ने स्थिति छ ।र अन्तिम बुँदा— संवादमा आधारित नीति निर्माण ।
छोराले किताबमापढेका कुरालाई व्यवहारमा देख्न पाएन, बरु बिजुलीका तारहरू पोल नै ढल्ने गरी अल्झेको भने देख्न पायो ! मर्मत–सम्भार गरेका ठाउँमा पनि काटेर फालिएका तारहरू कति दिनसम्म उठाइएका हुँदैनन् । यसले सवारी साधन र पैदल यात्रुहरूलाई असजिलो भएको हुन्छ ।
सार्वजनिकस्थान, पसल तथा सडकमा धूमपान गर्ननपाइने नियम बनेको धेरै भइसक्यो, तर व्यवहारमा लागू भएको पाउन सकिएको छैन । बाटोमा हिंँड्दै या चियापसलमाबसेर चुरोट तान्दै धूवाँको कुहिरीमण्डल बनाइरहेका युवाहरू तमाम देखिन्छन् । अरू त अरू, प्रहरी कार्यालयदेखि सय मिटरको दूरीमै यस्ता युवा भेटिने गरेका छन् । एक चियापसले भन्दै थिए, ‘एक गिलास चिया खान आउनेले पनि एक बोतल जारको पानी सिद्ध्याउँछ, अनि चुरोट नबेचेर के गर्नु त ? पानीको पैसा असुल्न भए पनि चुरोट बेच्नैपर्छ । चुरोट नबेचे चियापसल बन्द गरे पनि हुन्छ ।’ कस्तो विडम्बना !
अर्कातिर, पार्टी प्यालेस लगायतको आतंक छ । राति बेलैमा सुत्न नदिने पार्टी प्यालेसहरूलेबिहान पाँच बजेदेखि नै कसरतका लागि भन्दै ‘लडकी आँख मारे’ घन्काएर बालबालिकालाई मानसिक तनाव थपिदिने गरेका छन् । बिहानबिहानै जुम्बा डान्स, बेली डान्स गर्ने भन्दै चर्को स्वरमा त्यसरी गीत बजाउनेहरूले अरूको मानसिक स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्न सके कस्तो जाती हुने थियो !
कुनै पनि काम रातारात गर्न सम्भवनहोला, तर सुधारका लागि आ–आफ्ना ठाउँबाट हरेकले स्वच्छ मनले प्रयास भनेहरपल गरेकै हुनुपर्छ । लामो समयदेखि व्यग्रताका साथ देश विकासको पर्खाइमा बसेका नागरिकले कुराभन्दा काम देख्न सके राहत महसुस गर्ने थिए । नेतादेखि ठूलठूला व्यापारी, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म बस्ने भद्रगोल काठमाडौंलाई स्मार्ट सिटी बनाउन चौतर्फी पहल गर्नुपर्छ । ‘हाम्रो देशकासडकको पिचभन्दा त केटीले लगाएकै लिपस्टिक बढी टिक्छ’ भन्ने भनाइ चरितार्थ हुन दिइरहनु भएन ।